Blogging ee Ganacsiga | Martech Zone
Blogging -ka Ganacsiga
Talaado, Febraayo 9, 2010 Axad, Oktoobar 19, 2014 Douglas Karr
Hadaadan joogin Webtrends Engage 2010 shirkii, waad ka baaqatay shir sirdoon ganacsi oo cajiib ah. Ka qayb qaadashadu waa ka duwan tahay shirarka shirkadaha kale ee aan tagay Ujeeddadu waa in la siiyo macaamiisha iyo xirfadleyda warshadaha soo-gaadhista qaar ka mid ah khubarada ugu fiican uguna iftiinka badan dhammaan warshadaha khadka tooska ah ka shaqeeya. Isdiiwaangeli sanadka dambe Ka hawlgal San Francisco - had iyo jeer way iibiyaan!
Sannadkan waxaa laygu casuumay in aan sameeyo orod, 10 daqiiqo awood koronto oo ku saabsan wax suuq geynta internetka la xiriira iyo in aan xiisaynayo. Waxaan go'aansaday inaan wax ku sameeyo marketing inbound (dhagsii hadaadan arkin bandhigga). Magaalada New Orleans, waxaan si gaar ah uga hadlay ganacsiga ganacsiga suuq geynta, laakiin dhaqamada ugu fiican ayaa khuseeya ganacsiga sidoo kale suuq geynta macaamiisha.
Bandhiggii asalka ahaa xoogaa wuu ka duwanaa tan iyo markii la animation ahaa oo si qurux badan loogu fidiyay shaashad 80 cagta ah oo iga dambaysay… laakiin waa kan hilibkiisii!
Dabcan, haddii aad joogi laheyd New Orleans, waxaad heshay daaweyn dhab ah… Hadalkeyga ayaan sameeyay waxaana isbarbar dhigay Baraha Bulshada iyo isbadalka qoob ka ciyaarka. Xitaa waxaan ku tuuray dhowr tallaabo oo aan qoslay. Waxay ahayd waqti aad u wanaagsan hareeraha!
Waa kuwan soo koobitaanka waxyaabaha ku jira bogagga:
Istaraatijiyadaha Suuq geynta
Qasabinta nuxurka waa waxa dhaliya beddelaad. Mawduuc weyn waa isku-darka isticmaalka ereyga muhiimka ah iyo waxyaabaha ka jawaabaya booqdayaasha su'aasha? waxayna ku dhiirigalinaysaa tillaabada xigta ee habka iibka. Balooggaagu wuxuu ku habboon yahay makiinadaha raadinta.
Dib ugu soo noqoshada maalinta, Iibinta iyo Suuqgeynta ayaa ahaa isha laga helo macluumaadka rajada. Rajada ayaa ku tiirsanayd iyaga.
Hada Mashiinnada Goobiddu badanaa waxay bixiyaan macluumaadka ay rajadu raadinayaan.
Warbaahinta Bulshada ayaa hadda saameyn ku leh raadinta iyo saameyn ku yeelashada go'aanka. Rajada hadda waxay kaheleysaa macluumaad shabakadaha Raadinta iyo shabakadooda bulshada.
Haddii kooxahaaga Iibka iyo Suuqgeyntu ay doonayaan inay ka qayb qaataan go'aan qaadashada rajada, waxay u baahan yihiin inay horseed u noqdaan raadinta oo ay ku lug yeeshaan shabakadaha bulshada. Mar dambe shirkaddu si fudud uma sugi karto inay yeelato rajo? Iyagii u imaada?
Waxaad u baahan tahay inaad meel walba joogtid!
Isticmaalidda isku xirnaanta iyo qalabyada kale ee is-dhexgalka ayaa kaa badbaadin kara waqtiga oo kaa horjoogsan kara meesha aad u baahan tahay!
Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira qalab kale oo suuqa yaala oo lagu fududeynayo baahidaada is dhexgalka.
Qoraal kasta oo baloog ah waa inuu lahaadaa waddo hawlgal Caadi ahaan, tani waa wicitaan ficil ah, bogga degista, beddelaad!
Macaamiilku wuxuu ku soo dhacayaa bartaada, wuxuuna arkayaa wicitaan ku habboon oo wax looga qabanayo. Wicitaankaas ficil wuxuu ku hogaamin doonaa bog degitaan ah iyo musqusha beddelashada.
Dadka badankood wax ma akhriyaan. Repeat: DADKA BADAN MA QAADO? AKHRISO! U isticmaal barta cad-cad si wax-ku-ool ah, ku calaamadee sawirro oo ku dar fiidiyow iyo maqal. Quudiya dareemayaasha: muuqaal, maqal, suuxdin.
Soo Degsashada, Dhacdooyinka, Su'aalaha iyo Jawaabaha, E-mayllada, Wargeysyada, Abaal-marinnada ?. Dhammaan xulashooyinkani waa inay u baahan yihiin foom xog ah oo lagu ururinayo macluumaadka hoggaaminta. Blog-gaagu waa lacag la’aan? wax kasta oo kale ugu beddel xogta!
Samee bogag soo degitaan oo soo jiidasho leh oo soo qabta xaddiga ugu yar ee xogta iyo xitaa u-qalmitaanka hoggaaminta. Ka dhig mid fudud. Tani waa tusaale heer sare ah Isku-darka.
Cabir sida hogaamiyaashaadu u imanayaan? iyada oo loo marayo isugeynta, warbaahinta bulshada, wargeysyada emaylka, dhacdooyinka, iwm. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad ogaato halka ay tahay inaad maal gashato waqtiga ugu badan!
U fiirso tixraacyada boggaga, dejinta yoolalka, oo la soco mashiinnada beddelka!
Aniga? M Douglas Karr (Twitter: @douglaskarr), Haddii aad caawimaad u baahan tahay, ila soo xiriir aniga Highbridge.
Oh… oo waxaan ku dari karaa inaan ku furay furfuran fantastik ah Indianapolis ilaa New Orleans oo ku saabsan Super Bowl. Looma baahna in la iraahdo saadaashaydu meel xun ayey martay meel ka mid ah rubucii 4aad taageerayaasha Saints-na waxay ii sii sheegeen habeenka Axadda!
Tags: blogging ganacsigabaloog loogu talagalay seoblogging shirkadahaGashomarketing inboundSEOwebtrends galaan
Noqo Mid iskaa wax u dan ah oo ku saabsan isku xirnaanta xiriirka bulshada